Ahoana ny fomba fampifanarahana sary amin'ny Apple Watch | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fampifanarahana sary amin'ny Apple Watch
Angamba maro aminareo no tsy mahita dikany firy amin'ny fijerena sary eo amin'ny efijery kely an'ny Apple Watch, ary angamba koa, marina ny anao. Na izany aza, ity fampisehoana OLED ity dia mirehareha amin'ny kalitao mamirapiratra ary tsy maharary velively. manana ny sasany amin'ireo sary tianao indrindra izay tratry ny tananao izay, araka ny ho hitanao, dia tena tsotra.
Ireo sary avy amin'ny iPhone-nao, amin'ny Apple Watch anao
Ny mpampiasa dia voafetra amin'ny fampandrindrana rakipeon-tsary tokana ao amin'ny anay Apple Watch; Mba hanatanterahana an'io asa io dia sokafy ny app Apple Watch amin'ny iPhoneo ary safidio ny fizarana "Photos".
Avy amin'ity efijery ity dia afaka misafidy isika raha te haneho ny fampandrenesana momba ny Sary iCloud avy amin'ny iPhone na mamorona fanairana manokana ary koa misafidy ny fetran'ny fitahirizana sary ao aminay Apple Watch.
Toy ny amin'ny mozika, azontsika atao ihany koa ny misafidy ny isa faran'izay betsaka an-tsary tianay hotehirizina sy ny habeny. Safidio ny safidy tianao ary tsindrio ny "Photos" eo amin'ny zoro ambony havia mba hiverenana.
Tsindrio izao ny "Rakitra namboarina" hisafidianana ny rakitsary sary ao amin'ny iPhone hotehirizinao ao amin'ny Apple Watch. Azontsika atao ihany koa ny misafidy ireo sary tianao indrindra ka izay sary vaovao izay marihantsika fa ankafizinay dia halefa ho azy any amin'ny Apple Watch.
Raha vantany vao nifidy ny rakikira tianao ampifanarahana ianao dia miverena amin'ny efijery an-trano an'ny anao Apple Watch ary tsindrio ny «Sary» app.
Y ANKAFIZO ny sarinao tsara indrindra ao amin'ny Apple Watch. Azonao atao ny mivezivezy eo anelanelan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fikasihana sy ny fivezivezena amin'ny rantsan-tànanao eo amin'ny efijery na ny fanaovana zoom amin'ny alàlan'ny Digital Crown.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fampifanarahana sary amin'ny Apple Watch
Ousted Scott Forstall dia 'faly' Apple mbola manamboatra vokatra tsara
Ny beta fahatelo an'ny OS X 10.10.4 dia misy ho an'ny mpamorona ankehitriny